Tadjik Mpikambana Ao Amin’ny Parlemanta Mitsipaka Ny Mariazy Mifangaro “Indrindra Amin’ny Shinoa“ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2013 12:30 GMT
MP iray avy amin'ny antoko Demokratika an'ny Filoha Emomali Rahmon, matetika ny fandraisana andraikitr'i Armishoeva eo amin'ny lalàna dia toa miresaka mariazy hatrany. Raha hiverenana ny taona 2010, nanolotra hevitra ny amin'ny tokony hanemorana ny taona ahafahan'ny vehivavy manambady ho 22 taona izy, ary talohan'io dia nitarika andrana tsy nahomby iray ho fitsipahana ny fanambadian'ny mpihavana akaiky izy. Ankehitriny dia niverina indray amin'ilay lohahevitra tiany indrindra izy amin'ny alalan'ny fampitandremana ireo vehivavy Tajik tsy hanimba ny andian-taranaka amin'ny fanambadiana olona tsy Silamo, “indrindra fa ny Shinoa”.
MP Amirshoyeva (RFE/RL)
Tsy “généticienne” i Amirshoeva, na koa araka ny fijery azy, no tsy diplomaty. I Shina no firenena lehibe sy matanjaka indrindra any amin'ny firenena manakaiky an'i Tajikistan, ary noho izany mpiara-miasa manan-danja indrindra amin'i Dushanbe. Araka izany, ny fironan'ilay MP amin'ny fanondroana an'i Shina dia milaza ny tahotra mihanaka be tsapan'ireo mponina ao Tajik ny amin'ny fitombon'ny isan'ny Shinoa ao amin'ny firenen'izy ireo. Ny Volana May, mpanao politika iray avy amin'ny mpanohitra no nitaraina fa miha-mitsofoka lavitra anatin'ny sisintaniny ireo mpiambina sisintany Shinoa ary manantona ny faritanin'i Tajik, roa taona monja taorian'ny nanoloran'ity Repoblika be tendrombohitra ity tany ho an'i Beijing. Rehefa nitsofoka tamin'ilay resaka ny tabataba be nataon'ireo filazam-baovao tao Rosia, dia toa lasa ho [ru] sarotra be indray ny nanamarina ilay fitarainana.
Kanefa raha hiverenana ny tenin'i Amirshoeva, izay nilaza [tj] ny 01 Jolay fa :
Tsipahako ny fanambadin'ny vehivavy Tajik aminà lehilahy hafa finoana, na firenena – Rosiana, Shinoa, na hafa. Tsy handray ny fomban-drazantsika sy ny fanaontsika izy ireo… Mihevitra koa aho fa afaka ny hanambady vehivavy hafa finoana ny (lehilahy) Silamo-Tajik. Kanefa mitsipaka ny hanambadian'ny vehivavy Silamo-Tajik lehilahy hafa finoana, indrindra fa Shinoa.
Ilay MP Amirshoeva dia tsy nanazava ny antony nilazany fa i Shina izay manana finoana azy manokana, na ireo tsy Silamo dia afaka ny hiova finoana ary hanambady ny vehivavy avy ao Tajik (“Anontanio mikasika izany ireo mullahs”) kanefa misy ny mpomba sy mpitsikera ny fomba fijeriny ny mariazy sy ny fihetseham-pony manoloana ireo olona avy any amin'ny “Empire Céleste”. Mpaneho hevitra iray tao amin'ilay vohikala Asia Plus izay nanoratra tamin'ny solon'anarana hoe “тима” no nananihany hoe [ru] :
Tonga soa ato amin'ny “Moyen age”. Adinon-dRamatoa Amirshoeva ny nilaza fa ny zo [ara-panambadiana] amin'ny alina voalohany dia an'ny Grand Vizier.
Fihetseham-po mahatsikaiky iray avy any [ru] amin'i cuckooev :
Tena manohana tanteraka ny fanambaran'ny Solombavambahoaka malalantsika izahay. Tazonintsika ny andian-taranakitsika. Hoy ilay marary ato amin'ny hopitaly “Koktash” fitsaboana aretin-tsaina [Hopitaly fanta-daza iray ao Dushanbe]
Kanefa i Анушервони Одил (Anushervoni Odil) dia nilaza hoe [ru] :
Tena marina ! Tsy tokony hanambady lehilahy hafa finoana ny vehivavy Silamo. Tsara ny hananantsika olona mihevitra ny voninahitra sy ny maha-izy azy ny firenena.
Tao amin'ny fanadihadian'i Asia Plus, nilaza i Armishoeva fa heviny manokana izany ary tsy eo an-dalam-panerena ny amin'ny fandaniana lalàna iray hafa mikasika ny mariazy aho hatramin'izay naha lasa an'i Tajikistan ho firenena “demokratika” izay. Kanefa tany amin'ny fanadihadiana hafa iray tao amin'ny vohikala Ozodagon, dia toa mifanohitra amin'izany no nolazainy [tj] :
Ny tena marina, fantantsika fa manenjika ireo lehilahy manan-karena sy manambady any amin'ny firenen-kafa ny vehivavy ao Tajik, izay tena mampalaelo ho antsika Reny rehetra eto Tajik. Isika, vehivavy Tajik amin'ny maha Silamo antsika dia tsy manan-jo hanambady lehilahy hafa finoana. Ary amin'ny maha Solombavambahoaka ahy, manome toky aho fa hiady ho an'ny fahalalahan'ny mariazy araka ny lalam-panorenana.
Raha toa ny fanehoan-kevitr'i Armishoeva ka nampiova zavatra, dia mampahatsiahy teboka sarotra iray ho an'ireo mpisera anay aterneto – ny famarotana ny tany ao Tajik amin'ireo mpiray vody rindrina ngezalahy aminy ny taona 2011.
Hoy ny УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ (mpampianatra Jeografia) nampahatsiahy [ru] :
Noho izany azo atao ny mivarotra ny tanin'i Tajik amin'ny Shinoa, fa tsy azo atao ny maka vady azy ireo ? Tsy misy atidoha ny Solombavam-bahoakantsika
Ny sary eo amin'ny pejy voalohan'ny Platforma – Facebook natao ho an'ny rehetra iresahan'ireo mponina ao Tajik ny olana ara-politika – nilaza ireo kolikoly fivarotan-tany amin'i Shina, mihoatra lavitra noho ny fiterahana amin'ny Shinoa, no loza goavana tena mananontanona ho an'ny mponina ao Tajik. Io lehilahy amin'ny sary io dia ny filoha Tajik Emomali Rahmon. Toy izao no fivakin'ny soratra : “Manan-javatra ho tenenina amin'ny governemanta Tajik ve ianao ? Eto ny toerana fanaovana azy!”
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tetikasan'ny Mpianatra asa ao amin'ny GV ao Azia Afovoany ao amin'ny Oniversite Amerikana an'i Azia Afovoany ao Bishkek, Kyrgyzstan.